Nwee Ike - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Nwee Ike)
200W Na-ekpuchi Iju Mmiri Light Fixtures
Ìhè Iju Mmiri 200 B Bier nwere ike mee ka ìhè dị ọcha dị 24000lm dị elu. Igwe Mmiri Iju Mmiri nke a n'èzí bụ oghere 120 Celsius, onyinyo-enweghị nnyefe ma ọ bụ mgbochi, na-enye ìhè dị mma maka ebe obibi gị mpụga ma na-agbakwụnye nchekwa ọzọ n'ụlọ gị. Anyị 200W Led Flood Ligh t nwere ike dochie bọtịnụ halogen...
Ejiri ọkụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ ọkụ 50W
Ejikere 50 Ejiri Na-enwu N'okpuru Ikike Mkpuchi nwere ihe ruru 6000 Lumens ma nwee ike dochie ọkụ HPS / HID / HALIDE ọkụ 175W. Nke a mere ka kanopi Retrofit bụ ụzọ dị mma ị ga-esi na-aga LED ma zọpụta ego! Ejiji anyị na-ekpuchi windo na- eji Phillips 3030 LED Technology nweta 120 lumens per watt na ìhè ọrụ na 120...
Nwee Ike Nwee ike Ngwunye Nwepu Ike Enwere Ike Ike 240W Ike Igwe Enwere ike ịgbanwu 100W Ịgba Ngwá Ike Ndabere Okirikiri Uhie